Sidee loo Cunaa Gourmet Pretzel? | Martech Zone
Sidee loo Cunaa Gourmet Pretzel?
Khamiista, Oktoobar 18, 2007 Khamiista, Oktoobar 18, 2007 Douglas Karr
Talaadadii waxaan safar dabeyl ah ka soo kicitimay Indianapolis ilaa Tampa ilaa Atlanta waxaanan dib ugu soo noqday Indianapolis. Ma jirin waqti aan ku booqdo asxaabta ama qoyska (xitaa ma aanan wicin si aan ugu sheego)… kaliya kulan iyo inaan hawada kusoo laabto. Duulimaadyadayagii waxaa lagu sameeyay Xawaaladda oo anigu waan layaabay.
Waxaa laga yaabaa in qaybta ugu weyn ee duulimaadku ay hoos ugu sii dhaceyso boorsadeyda yar ee jilitaanka iyo akhrinta xirmada:
Waxaan ahay nuugaya xayeysiis xariif ah runtiina laad baan ka helay kan!
Tags: 2011soo bandhig blogworldblogworld Los Angeleswordpress bar sare
Maalinta Waxqabadka Blog: Biyaha iyo Saliida
Oktoobar 19, 2007 at 8:42 AM
Miyaad igu ciyaareysaa! Kani ma yahay baakad halis ah ???? Ma quus bay ka yihiin iibka? Xaqiiqdii waa wax aad u jilicsan oo wajigaaga… Waan ka helay b .laakiin ma aanan rumaysan markii aan aqriyay.
Oktoobar 19, 2007 at 2:56 PM
Taasi waa wax laga naxo. Aniguba waan nuugayaa. Waxaan cuni lahaa boorsada kaliya b / c ee baakadka xitaa ma jecli kuwa kale.
Oktoobar 20, 2007 at 1:49 PM
Waa xariifnimo, taas ayaan iyaga siin doonaa, laakiin xariifku ma bixiyo biilasha. Waxaan la yaabanahay haddii ay abuurto ballansasho.
Air Tran wuxuu leeyahay qaab suuq wanaagsan / qaab dhismeed wanaagsan, sidaa darteed waxay noqon kartaa uun dadaal lagu gaarayo macaamiisha, halkii laga noqon lahaa dadaal jiil ganacsi.
Oktoobar 20, 2007 at 9:18 PM
Bal qiyaas layaabkeyga markii aan arkay qoraalkaaga oo wata boorso boorsooyin ah oo aan maalmo ka hor cunay anigoo ka duulaya Ohio una socda Orlando, Fla! Xayaysiis la yaab leh, miyaanay ahayn?
Xaqiiqdii, qoraalkani wuxuu cudurdaar wanaagsan ii ahaa inaan kuu qoro faallo maxaa yeelay waxaan isku dayay adeegsiga foomka xiriirkaaga inaan ku waydiiyo sababta aan dhib ugu qabo boggeyga. Waxaan ka codsaday dad aan tiro lahayn inay ii soo diraan fariin tijaabo ah iyagoo isticmaalaya foomkaaga laakiin ma shaqeynayo sababo jira awgood. Kama imanayo emaylkeyga.
Waxa kaliya ee aan ka fikiri karo ayaa ah in emaylka aan ku soo qoro foomka xiriirkaaga uu yahay isla emailka aan ku adeegsanayo guddiga maamulkeyga. Sababtaas ma noqon kartaa?
Maadaama aadan ka jawaabin fariinteyda foomka xiriirkaaga, waxaan la yaabanahay haddii ay dhibaato ka jirto qof kasta, oo aan ku jiro aniga oo isticmaalaya.
Fadlan kugula tali.
Oktoobar 23, 2007 at 7:29 AM
Ma hubo waxa dhibaatadu noqon karto. Ii soo dir foomka xiriirkayga ee bogga aad ka dirayso. Fidinta waxay isticmaashaa awooda 'WordPress' awooda boostada sidaa darteed waa inay dirtaa fariin sida bartaada u diri laheyd
Oktoobar 23, 2007 at 7:49 AM
Waan sameeyay sidaad codsatay waana buuxiyay foomka xiriirkaaga, anigoo isticmaalaya cinwaankayga caadiga ah ee emailka (stephen (at) sjhopson (dot) com runti waxaan isku dayay inaan kula soo xiriiro foomka xiriirkaaga laakiin dib ugama maqal adigu. Waxay iga dhigaysaa inaan la yaabanahay haddii uu jiro wax ka qaldan foomka xiriirkaaga.
Sidii aan ugu qoray farriinteyda foomka xiriirka, markasta oo aan adeegsado cinwaanka emaylka ee kor ku xusan, kuwa doonaya inay ila soo xiriiraan foomka xiriirkaaga ee barteyda waligood farriintooda ma soo marin. Weligay ma aqbalin.
Si kastaba ha noqotee, markii aan cinwaanka emaylkeyga u beddelay sjhopson (at) yahoo (dot) com, farriimaha loo maro foomka xiriirkaaga ee boggeygu waxay ku yimaadeen si wanaagsan.
Miyaad u maleyneysaa inay tani wax ku leedahay xaqiiqda ah in cinwaanka stephen (at) sjhopson (dot) com loo isticmaalo cinwaanka emaylka maamulaha? Taasi miyay wax ku lahaan kartaa?
Waan la yaabay, ma garan karo waxa ii diidaya adeegsiga cinwaankayga ugu weyn e-mailka: stephen (at) sjhopson (dot) com maadaama cinwaanka foomkaaga xiriirka uu adeegsanayo gudbinta farriimaha.
Nov 23, 2009 saacadu markay tahay 6:49 PM
Douglas, aniga sidoo kale waxaa i soo jiitay pretzels-ka 'AirTran'. Kaliya hab caqli leh oo lagu ilaaliyo suuqgeynta, farriimaha astaamaha ah ee halkaa yaal.